ဂေဇက်ရေစီး လှိုင်းကြီးလေထန် ဖြစ်ရပ်မှန် (တွေ့မရှောင်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဂေဇက်ရေစီး လှိုင်းကြီးလေထန် ဖြစ်ရပ်မှန် (တွေ့မရှောင်)
ဂေဇက်ရေစီး လှိုင်းကြီးလေထန် ဖြစ်ရပ်မှန် (တွေ့မရှောင်)
Posted by ရာမည on Jun 29, 2014 in Creative Writing, Members, Myanmar Gazette, Think Different | 45 comments
^^^ ဂေဇက် ပြဿနာကို ဆန်းစစ်ခြင်း ^^^
ကျွန်ုပ်သည် မကြာခဏဆိုသလို ဂေဇက်ရွာတွင်း ဝင်ရောက်လေ့ရှိသူဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့မြင်ခဲ့လေသည် ။
လွန်လေပြီးသောရက်များစွာက စခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည် ။
ဤစာစုတွင် ကျွန်ုပ်၏အမြင်ကိုသာ သီးသန့် တင်ပြမည်ဖြစ်သကဲ့သို့ စာဖတ်သူ မန်ဘာများမှလည်း လွတ်လပ်စွာ ဝင်ရောက် ပြောဆို ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည် ။
မည်သူ၏ မှတ်ချက်ကိုမှဖျက်မည်မဟုတ်ပါ ဟုအာမခံပါသည် ။
မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ ဤဂရုတွင်ရှိသော အက်ဒမင်များမှ ဖျက်ခြင်း ပြင်ခြင်းများကိုသဘောထားကြီးစွာဖြင့် မပြုလုပ်စေလိုပါ ။
မန်ဘာသစ်များ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ဝမ်းသာကြရပါမည် ။ အသစ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ အားတက့်ပီးလျှင် ပို့စ်များစွာတင်တတ်သည် ။
သို့သော် ယခု အသစ်များသည် ပို့စ်တင်လိုသည့်စိတ်သာရှိပြီး FB မှ ထူးမခြားနားသတင်းများကို တိုက်ရိုက်ကူးယူခြင်း ၊ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံတည်းဖြင့် ပို့စ်တစ်ပုဒ် တင်ခြင်း ၊
မထူးခြားသော သတင်းတိုများ အားပို့စ်တစ်ပုဒ် ဖြစ်စေခြင်း များဖြင့်
လူတလုံး ၊ ဗရုတ် ကဲ့သို့ အိုးဆားဗစ်ကြီးများပင် အကောင့်ပေါ်တင်ခွဲ၍ အကောင့်တစ်ခုလျှင် နှစ်ပုဒ်မက တင်ကြလေသည် ။
ထိုအခါ ဝင်ရောက်ဖွင့်ဖတ်ရန်ခက်လှစွာသော ရွာထဲ၌ ပို့စ်ပေါင်းများစွာဖေါင်းပွလျက် ရှိလေတော့သည် ။
ကျွန်ုပ်တို့ရွာတွင် စည်းကမ်းထမ်းသိမ်းရေး မော်ဒရိတ်တာများ ရှိသည်ဟု သိရပါသည် ။
ထို မော်ဒရိတ်တာများသည် ထိုသို့ဖြစ်ရပ်များတွင် ဝင်ရောက်လမ်းညွှန်ခြင်းမတွေ့ခဲ့ရပါပေ ။
၂ ။ ရွာခံ လူဟောင်းများ အကောင့်ပွါး ဖြင့် ဝင်ပြောခြင်း
ရွာခံများထဲမှ စောဖောရှော နှင့် မဟာမင်းလှ ဝဏ္ဏကျော်ထင် အော့ကြောလန် အမည်ဖြင့် ဝင်ရောက် ပြောဆိုကန့်ကွက်ကြလေသည် ။
စောဖောရှောမှာ ပို့စ်တင်သူများကို အကွက်ဆင်ဝေဖန်သတိပေး၍ အော့ကြောလန်မှာ မော်ဒရိတ်တာများကို
ကဗျာရေး၍ ဝေဖန်လေသည် ။
ထို အခြေအနေအထိ မော်ဒရိတ်တာများ ထိရောက်စွာမဖြေရှင်းပါ ။
ကိုအလင်းဆက် တစ်ဦးသာ ဝင်ပြောနေသည်ကိုတွေ့ရသည် ။ မော့ ဆဲဗင်း အက်ဒစ်လုပ်သည်ကို ထောက်ရှု၍ အနည်ဆုံး ၇ ဦးရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည် ။
ကျန်သော၆ ဦးမှာ မတွေ့ရပါ ။
ထိုမော့ ဆဲဗင်းမှာ ထိုစဉ်က ဘယ်သို့ရောက်နေသည် ကို စဉ်းစားမရပါ ။
27 .62014 ညနေပိုင်းတွင် တွေ့မရှောင်ဟူသောနာမည်ဖြင့် ဂရုတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာပါသည် ။
အရေးအသား ရင့်သည်ဟု ယူဆရသော်လည်း မိုက်ရိုင်းသော စိန်ခေါ်သော စကားလုံးများ သုံးထားသည်ကိုမတွေ့ရပါ ။
ဂေဇက်ရွာတွင်း သတ်မှတ်စည်းကမ်းများထက်ပိုမို ဆဲဆိုရီုင်းပျပါက ဝေဖန်ရှုံ့ချမည် ။စာကောင်းပေကောင်းများကို အားပေးမည်ဟု ရေးသားထားသည် ။
ဆောင့်ကြွားကြွား နိုင်ဟန်ရှိသော်လည်း ပို့စ်ကို ဖျက်စေသည်အထိ အရေးယူရန်မလိုအပ်ပါ ။
၄င်းတို့သည် အက်ဒမင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ထိပါးသည်ဟု မော့ ဆဲဗင်းက စွပ်စွဲသော်လည်း အကောင့်သစ်သည် အက်ဒစ်ပင်မလုပ်နိုင်ပါ ။ အခြားသောအက်ဒမင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်များကို မလုပ်နိုင်ပါ ။
ကွန်မန့်ဖြင့် ဝေဖန်ခြင်းသာ ပြုနိုင်ပေသည် ။
၄င်း ကွန်မန့်ဖြင့်ဝေဖန်မှတ်ချက်ပေးခြင်းသည် မန်ဘာတိုင်း လုပ်ခွင့်ရှိသည်မဟုတ်လော ။
မော့ဆဲဗင်း စွပ်စွဲသကဲ့သို့ လွတ်လပ်မှုကိုထိခိုက်စေသည်ဆိုပါလျှင် မော့ဆဲဗင်း၏ဆောင်ရွက်မှုသည်လည်း
အာဏာရှင် ဆန်သည်မဟုတ်ပါလော ။
အက်ဒမင် ၏ညွှန်ကြားချက်မပါပဲ မိမိသဘောဆန္ဒနှင့် ဆောင်ရွက်မှုသည် ရွာသူရွာသားများအပေါ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်၍ နိုင်ထက်စီးနင်း ပြုလုပ်သည် မဟုတ်ပါလော ။
ပြန်လည်ရှင်းလင်းခွင့် ၊ သက်သေပြခွင့် နှင့်တကွ သံသယအကျိုးပင် ခံစားခွင့်မပေးပဲ တစ်ဖက်သတ် စီရင်ချက်သည် တရားမျှတ ပါသလော ။
မော့ဆဲဗင်းမှ ထိန်းသိမ်းလိုပါလျှင် စောဖောရှော အားသတိပေးရမည်ဖြစ်သည် ။
အချို့သော ကွန်မန့်တို့သည် အနည်းငယ် ရိခြင်း ထေ့ခြင်းနှင့် ပြဿနာဖြစ်စေသော စကားစုများလည်းပါဝင်နေပေသေည် ။
သို့သော် စောဖောရှောကို မည်သူဟု သိထားဟန်ရှိသည် ။ စိတ်ဆိုးခြင်း ပြန်လှန်ပြောဆိုခြင်း မတွေ့ရပါ ။
ကိုငြိမ်းမောင်နှင့် ကက်ပတိန်အမေရိက နှစ်ဦးသာ ဆန့်ကျင်ပြောဆိုသည်ကို တွေ့ရလေသည် ။ ထိုသူနှစ်ဦးသည် ရွာထဲပျောက်နေသူများဖြစ်သည် ။
အထူးသဖြင့် သိသာနေသည်မှာ အော့ကြောလန်နှင့် စောဖောရှောသည် ပြင်ပတွင် ပြောမနာ ဆိုမနာများဖြစ်ဟန်ရှိပါသည် ။ စကားအသွားအလာအရ ရင်းနှီးဟန်ရှိလေသည် ။
သို့သော် ဦးဦးပါလေယာနှင့် အော့ကျောလန်မှာ ရင်းနှီးဟန်မရှီပါချေ ။
စောဖောရှောနှင့် ဦးဦးပါလေယာမှာ ရင်းနှီးသူများ ဖြစ်နိုင်သည် ။ ဇတ်တိုက်၍ကွန်မန့်ပေးခြင်းဟု ယူဆရပါသည် ။
ထိုအခြေအနေကို မော့ ဆဲဗင်းလွှတ်ထားသည်မှာ ထိုသူများနှင့် ရင်းနှီးအားနာနေဖွယ်ရှိလေသည် ။
တခုထူးခြားသည်မှာ တွေ့မရှောင်သည် မော့ဆဲဗင်းကိုမည်သို့မျှပြန်မပြောပါ။
လူဟောင်းများ ဖြစ်သည်ဟုဆိုသဖြင့် မော့ဆဲဗင်းကိုသိနေပြီး မော့ဆဲဗင်းကမသိသော သူများဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
မော့ဆဲဗင်းကို ခင်မင်မှုဖြင့် မည်သို့မျှပြောဆိုခြင်းမပြုသည်ဟု ကောက်ချက်ဆွဲပါသည် ။
၃။ Mလုလင် နှင့် မှော်ဆရာ
ထိုနေ့နံနက်မှ ရွာထဲဝင်ဟန်ရှိသော ကိုလုလင်မှာ အဆိုပါပို့စ်အားမြင်တွေ့ပြီးလျှင် စိတ်ဆိုးသွားပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ရေးပါသည် ။
ပြဿနာ၏ အစ ကို သိဟန်မရှိပါ ။
ထို စတေးတပ်ကိုဖတ်မိသော မှော် ဆရာလည်း ရွာထဲဝင်ပြီး အဆိုပါပို့စ်ကို
ဖတ်ပါလိမ့်မည် ။ပြီးနောက် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ဟု တံဆိပ်ကပ်လျှက် စာတင်လေတော့သည် ။
တကယ် အာဏာသိမ်းပါသလား ။ မည်သူက အာဏာပြလိုက်ပါသနည်း ။
အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ဟု အပြောခံရသောသူတို့၏ပို့စ်သည် မော့ဆဲဗင်းမှ ရင်ဝညှောင့်ထိုး၍ ကားစင်တင်သတ်လိုက်ပြီဖြစ်လေသည် ။
ရွာထိတ်တွင် ဇောက်ထိုးဆွဲ၍ ပြထားလေသည်
နောင်လာနောက်သားများအား နောင်ကျဉ်စေရန် တောင်စွယ်နေမကွယ်မှီ ကွက်မျက်ပြီးလျှင် အများပြည်သူ ဖတ်နိုင်ရန် အမိန်ကြော်ငြာစာ တစ်စောင် ကပ်ထားခဲ့ပါသည် ။
၄။ အက်ဒမင် ဦးခိုင်
ယ္ခင်နေ့များတွင် ပစ်ထားသော ရွာအား ထိုနေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဝင်ကြည့်ပါသည် ။ အမေရိကန် စံတော်ချိန် နံနက်အိပ်ယာ ထချိန် ဖြစ်ပေလိမ့်မည် ။ ၄င်း၏ လက်မရွံ့ပါးကွက်အာဏာသား၏ လက်ချက်ဖြင့် မြန်မာ့ဂေဇက် မျက်နှာစာတွင် အပြစ်သားကို သွေးစက်လက်ဖြင့် တွေ့လိုက်ရလေသည် ။
မည်သို့သာ ဖြစ်သင့်သည်ကို သိသော အက်ဒမင်သည် သာမန်စာဖတ်သူများ သာမန် မန်ဘာများမမြင်တွေ့စေရန် သက်သေခံအား ထိန်ချန် လိုက်ပါတော့သည် ။
ဤသို့ဖြင့် ၃၀၂ လူသတ်မှုမှ ၃၀၄ /က လူသေမှု သို့အမှုပြောင်းဖွင့်ပြီးလျှင်
ထိုပို့စ်အား စတစ်ကီဖြုတ်ချ ကော်ပီပေ့စ် လုပ်၍ ချောင်ထိုးထားလိုက်ရာ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို
မော့ဆဲဗင်းကြီး အား သူရဲကောင်းဟူ၍မှတ်ထင်ပြီးလျှင် တွေ့မရှောင်အား လူယုတ်မာစာရင်းသွင်းကြလေတော့သည် ။
( ကျွန်ုပ်သည် တွေ့မရှောင်နှင့် မည်သို့မှ မပတ်သက်ပါ ထို့အပြင် ကလောင်ခွဲဖြင့်ပြောမည်လည်းမဟုတ်ပါ။
လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေး ငြင်းခုန်နိုင်ပါသည် ။
ကျွန်ုပ်ပြောရန်လိုအပ်ပါက ယခုကဲ့သို့ ပေါ်တင်ပြောပါမည် ။ အထင်အမြင်လွဲနေသည်ကို ကြည့်မနေနိုင်၍ဖြစ်သည် ။ ဂေဇက် ကောင်းစေလိုသောသူများ ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ပုံ လုပ်နုည်းမတူရာတွင် အထင်မှားကြခြင်းဖြစ်မည်ဟု ယူဆပါသည် ။)
tag အတွက် အဘဦးဖေါရိန်းကိုလည်းကောင်း
ရာမည has written 35 post in this Website..
View all posts by ရာမည →
ကျွန်တော် ဒီပို့စ်ကို ရွာထဲတင်ချင်ပါတယ်ဗျာ ။အဖျက်ခံရ မရမသေချာလို့ပါ ။
Like · 1 · More · 8 hours ago
ဒီ Post က ရွာထဲ တင်လို့ရလောက်ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့်ဗျာ ၊ ငြိမ်တော့မယ့် ဟာကို ပြန်ဆွသလို ဖြစ်မှာစိုးရတယ် ။
Unlike ·2·6hours ago
Anyway, the procedure, the cause n the effect are correct.
Unlike · 1 ·2hours ago
အကောင့်တစ်ခုကို တစ်ရက် ပိုစ့် နှစ်ခုတင်ခွင့်ရှိသကိုး
ပိုစ့် ၂ ခုပဲတင်ရမလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်
ဒါကြောင့် သူကြီးက မတင်ရလို့ ပဲပြောထားတာ
နောက်တစ်ခု ဂဇက်က လွတ်လပ်တယ်
Unlike ·3· 1 hour ago
လှိုင်းကြီးလေထန် ဖြစ် ရပ်မှန်ပေါ့။
အသာ လုပ်ကြပါကွယ် ။
၂ ဖက်လုံးက ဂဇက် ကောင်းစေချင်လို့ ၊
စေတနာ ရှေ့ထား လုပ်နေသူတွေဘဲဟာ ။
Like · 1 hour ago
Ko Pauk Mandalay
ကျနော့် အမြင်ပြောရရင် (၁) တွေ့မရှောင် သည် ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်လာသော် လည်း စကားေ ပြာ သည် မှာ မာကျောရင့် သီးတယ်လို ခံစားရပါ တယ်။( အဲ တော့ အ၀ါကဒ်ပြ ပါ တယ်)
Like · 1 · 1 hour ago
(၂) အားမနာ တမ်းပြောရလျင် ဂေဇက်မှ မော့ဒ်များ သည် ရွာ ကို ပစ် ထား တယ် လို့ ခံစား ရ ပါတယ်။ကျနော် သိသလောက်မော့(၈)ယောက်ရှိ တယ် လို့ သိထားပါတယ်။ ကျနော် က တော့ မောဒ်အဖြစ် သိထား သူ ၂ ယောက် ဘဲ ရှိ ပါတယ်။ ဘာလို သိ နေ လဲ ဆိုတော့ အချို့ သော အက် ဒစ် မရ သေး သော ရွာ ထဲ မှ မင် ဘာ အသစ်များ က သူတို့ ရေး တဲ့ စာတွေ ကော်မင်း တွေ ပြင် ချင် တဲ့အခါ ကျနော် ကို ပြင် လို့ ရမယ် ထင် ပြီး အကူ အညီ တောင်း တဲ့ အတွက် ကျနော်က ထပ် ပြီး အကူ အညီေ တာင်းရ ပါတယ။် အဲ ဒီအခါမှာ သူတို့ က အကူ အညီ ပေးလို့ ပါ။ အဲ တော့ အကြံ ပေးချင် တာ တစ် ခု က ရွာထဲမှ အကူ အညီ တောင်း လို သူ များအ တွက် မောဒ်များနဲ့ ဆက်သွယ် စ ရာ နေ ရာ လေး တစ် ခု ဖန် တီးေ ပး သင့် ပါတယ်။
(၃) တွေ့ မရှောင် ကိစ္စ မှာ မော့ (၇) လုပ်ရပ်သည် တရား နည်းလမ်း မကျ လို့ ခံ စား ရ ပါသည်။ စကားပြော မာ ကျော ရင့် သီး သည် လို့ ထင် ရ သော် လည်း မိုက်ရိုင်းသော စကားလုံး မပါ ပါ။ ကန့်  ကွက် မည် ရှုံချမည် ဆို သောစကား လုံး ပါ သော် လည်း ပိုစ်တစ်ခု အား ဖျက် လို ဖျက် ဆီး လုပ်သော စကား ရပ် မပါ ပါ။သို့သော် အက် ဒစ် လုပ် ရုံ မက စတစ် ကီလုပ် ပြီး အထက် တက် ကပ် လိုက်သောအခါ အင်္ဂလိပ် လက် ထက် က ဂဠုန်ဆရာ စံ ရဲ့ တပ်သားများ ခေါင်း ဖြတ် ပြီး ခြံ စီး ရိုး ချိတ် ထား တာကို မျက်ေ စ့  ထဲ မြင် လိုက်ပါတယ်။( အဲ တော့ ရွာ သူ ကြီး အနေ နဲ့ က လဲ ဒီ မောဒ်7ကို နောင် ဒီ လို မ လုပ် ဘို့ သတိပေး တဲ့ အနေ နဲ့ အ၀ါ ကဒ် ပြသင့် ပါတယ်။
Edited · Like · 59 minutes ago
လူငါးယောက်လောက်က ၄င်းကဲ့သို့ တင်ပါလျှင် စည်ကားရာမရောက်ပါပဲ စိတ်ညစ်ဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ။
တကယ်ရော အကောင့်ခွဲနှင့်ပေါ်တင် တင်ခွင့်ပေးထားပါသလား ။
မော့ များသည် စည်းကမ်းထိမ်းသိမ်းသည်ဆိုပါလျှင်
ထိုသို့ အမြင်မတော်သည်ကို ငြင်သာစွာပြောပြခြင်း ၊ တိတ်တဆိတ် စာဖြင့်သတိပေးခြင်း စသည်များပြုသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။
မိုက်ရိုင်းသော ကြမ်းတမ်းသော ဆဲဆိုသောပို့စ်ကိုဖျက်မည်ဆိုပါလျှင်
ကပ္ပယ သာဒင်ရေးခဲ့သော “”စောက်တန်းမျိုးချစ်များသို့မေတ္တာစာ “” ကို
-ီး ခြင်း မိုးမွှန်စွာ အပြန်အလှန်ဆဲသော ပို့စ်ဖြစ်နေပါတယ် ။
ယ္ခု ဖျက်သောပို့စ်မှာ ရိုင်းပျသောအသုံးအနှုံးမတွေ့ရပါခင်ဗျာ ။
ထို့အပြင် ၄င်းတို့၏အပြုအမူ ဆောင်ရွက်ချက်လည်း မတွေ့ရသေးသဖြင့်
ရွာထဲလာပြီး လူမိုက်လုပ်သည်ဟု ပြောလျှင်စောပါသေးသည် ။
လွတ်လပ်စွာမိမိကိုယ်ကို ထိမ်းကျောင်းသင့်သည်ဆိုပါလျှင် မပြောပလောက်သော အပြစ်ကို မော့ဆဲဗင်းမှ အရေးယူခြင်းသည် လွတ်လပ်မှုကို ချိုးဖေါက်ခြင်းပင်မဟုတ်ပါလားခင်ဗျာ
Like ·2· More · 53 minutes ago
ရွာထဲတင်ဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ထားပါတယ် ။နောက်ထပ်မကန့်ကွက်ရင်တင်လိုက်ပါမယ်
Like · More · 52 minutes ago
(၄) သူကြီး ကိုခိုင် ကလဲ အလုပ်များ တာ မှန် ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် ကိုယ် ရွေးချယ် ခန့် ထား တဲ့ မောဒ် များ နဲ့ အဆက် အသွယ် ရှိ နေ သင့် တယ် လို့ ယူ ဆ ပါတယ်။တကယ် တော့ အဆက် အသွယ် မရှိ လို့ သာ ရွာ ထဲမှာဘာဖြစ်နေ တယ် ဆို တာ ကို မသိ လိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ မောဒ်တွေ ဘက် က ပြော စရာ ရှိ ပါတယ် သူ ကြိး ခန့် လို့ ကျုပ် တို့  မအားဘဲ လုပ်နေ ရ တာဆို တာ ကို ပါ ဘဲ။ အဲ တော့ အကြံ ပေး ချင် တာ တစ်ခု က ကိုယ် မ လုပ် အား ရင် မ လုပ် နိုင် ရင် သူ ကြီး က မောဒ်လုပ် ပါ လို့ အကူ အညီ တောင်းလာ ခဲ့ ရင် ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်း ပယ် ခဲ့ ရင် တာ ၀န် ထမ်းဆောင် နိုင် သူ တစ် ယောက် ကို ထပ်ပြီး ရွေး ချယ် လို့ ရသွားမယ် လို့ ယူ ဆ ပါ တယ်( မောဒ်ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဘာ ခံ စား ခွင့် မှ ထူး မရ ဆို တာ သိ တဲ့ အတွက် မောဒ် အဖြစ် လက်ခံ ခဲ့ သူ များ ကို လဲ ကျေး ဇူးတ င် လေး စား ပါ တယ်)
Like · 1 · 51 minutes ago
(၅) ဒီရွာ က ဒီ မို ရွာ လို့ အများ က လက် ခံ ပါတယ်. မိမိပြောတာ ကို တာ ၀န် ယူရဲ ရင် ကြိုက်တာ ပြော လို့ ရ ပါတယ်။ သူ ကြီး ကို ခိုင် ကိုယ် တိုင် က လွတ်လပ်စေ ချင် တယ် မချုပ် ချယ် ဘူး ဆို တာ လဲ သိ ရ ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် ရွာ နံ ဘေး မှာ ရွာသား တွေ လိုက် နာ သင့် တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ကို အများမြင်အောင် ရေး ထား ပါတယ်။ အနည်း နဲ့ အများ စည်းကမ်း ထက် ကျော် လွန်ပြီး ရေး သား ကြ သူ တွေ ရှိ ပါ တယ်။အများ နား မ ခံ သာအောင် ဆဲ ဆိုပြောတာကို ခွင့် လွှတ်ခဲ့ ကြ ပါ တယ်။ အခု ဖြစ်တာ က လဲ ကော်ပိပေးစ် တွေ အများ ကြီး တက်လာတော့ ကိုယ် တိုင် ရေး သား သူ တွေ ရဲ့ စာတွေ က နောက် ကို ရောက်သွား တာက နေ စ လာ တာ ပါ ဘဲ။ လွယ် ပါတယ် ဒီကိစ္စ က ဆဲ ဆို ထားတဲ့ ပိုစ် တွေ တက် လာ တယ် ဖျက် စရာမလို ပါ လွယ်လွယ် ဖတ်မရ အောင် လုပ် ထား လိုက် သတ်မှတ်တဲ့ 2ပုဒ် ထက်ပို တက် လာ မယ် ဆို ရင် မောဒ် တွေက သူ့  ကို ရက် စွဲ ပြောင်း ပေး လိုက် ရင် 2ပုဒ် ထက် မကျော် တော့ တာ အသေ အချာ ပါ ဘဲ
Like · 44 minutes ago
(၆) ရွာ ချစ် သူ များ ကို ပြော ချင်တာ တစ်ခု ကတော့ ရွာ နဲ့ ပါတ်သက် တဲ့ အကြောင်း ကိစ္စ ပေါ် လာ ရင် ကိုယ် တိုင် သေ ချာမ သိ ဘဲ (ကိုချော စကား ငှားသုံးပါမယ်) နားစွန် နား ဖျား ကြားတာနဲ့ ထ မအော် ကြ ဘို့  ပါဘဲ။ ဒါမျုိး က မိတ် ပျက် တတ် လို့ ပါ။ နောက် ရွာသူရွာသား အား လုံး က မိတ်ဆွေ တွေ ဖြစ် နေ လို့ ပါ။
Like · 42 minutes ago
(ရ) အလကား နေ ၇င်း ၀င် ၀င် ငန် ထတ် တဲ့  ကျနော် ကိုေ ပါက် ကို ၀ိုင်း ဆဲ ပေး ကြ ပါ။ နောင် ၀င် ပြီး လျှာ မရှည် ရဲအောင် လို့ ။
Edited · Like · 37 minutes ago
နောက်ထပ် တစ်နာရီစောင့်ပါမယ်ခင်ဗျာ ။ခိုင်လုံသော ကန့်ကွက်မှုမရှိရင် ရွာထဲတင်ပါတော့မယ်
Like · More · 38 minutes ago
ပိုစ်တင် မ ကဘူး ကျ နော် ပေး ထား တဲ့ ကော် မင်း တွေ ပါ ကော် ပီ ကူး တင် စေ ချင် ပါတယ်
Unlike · 1 · 37 minutes ago
ရွာထဲ တင်သင့်ပါကြောင်း။ အပြင်ကနေ မန်ဘာမဟုတ်စာဖတ်သူများပါ သိရှိ ရှင်းလင်းစေသောကြောင်း ဤရှင်းချက်ကလေးကို ထောက်ခံပါကြောင်း။
ဘယ် သူ့ကို မေး နေ တာ မှန်း မ သိ ပေ မဲ့
ကျွန် မ သ ဘော ကို တော့ ပြော ပါ မယ်
တ ကယ် ကို တင် သင့် တာ ပါ
္နဒီ လို သေ သေ ချာ ချာ ရှင်း ပြ ထား တဲ့
ပိုစ့်မျိုး ကို တော့ ဖျက် ချင် ပေ မဲ့ လည်း
အ ဆဲ ခံ ရ မှာ ကြောက် လို့ 
ဖျက် လိမ့်မယ် မ ထင် ပါ
ဘု မသိ ဘ မသိ ဝင် ပြော တာ တွေ ပဲ စိတ်ကုန် တယ်။ ခါတော်မှီ ဆွမ်းးကြီးးးလောင်းးးးးး
ရွာသားများဂရုမှပြောဆိုထားသော ကွန်မန့်များ အား ကူးတင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ ။
ကျနော် ကော်မင်း က တော့ ဖျက် စ ရာ မလို ပါ ခင်ဗျာ
snow smile says:
ကျွန် မ comment ဖျက် စ ရာ မ လို ပါ
ထပ် ပြော ချင် နေ တာ တွေ တောင် ရှိ သေး
အ ဓိ က တာ ဝန် ရှိ တဲ့ သူ တွေ ငြိမ် နေ လို့ 
စော ဖော ရှော
အော့ ကြော လန်
တွေ့ မ ရှောင် ဆို တာ တွေ ပေါ်လာ ရ တာ
အဲ့ ဒါ ဘဲ
ဒါ ပေ မဲ့
တွေ့ မ ရှောင် စ ကား ပြော ချက် က မ ညက် တော့
ရည် ရွယ် ချက် ကောင်း ပေ မဲ့
လူ ပြော စ ရာ ဖြစ် သွား တာ
” ဂေဇက် ကောင်းစေလိုသောသူများ ဖြစ်သော်လည်း လုပ်ပုံ လုပ်နုည်းမတူရာတွင်
အထင်မှားကြခြင်းဖြစ်မည်ဟု ယူဆပါသည် ”
အဲဒါ အမှန်ပါဘဲကွယ် ။
ဘက် ၃ ဘက် စလုံးမှာ ၊ နဲနဲစီ လွန်သွားတယ် ထင်မိပါတယ် ။
၁ ။ လူတစ်လုံးတို့ ဘက်ကလဲ Copy / Past တွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်သွားတယ် ။
၂ ။ တွေ့မရှောင် ဘက်က ကျတော့လည်း စေတနာမှန်ပေမယ့် လုပ်ပုံ ပြောပုံ နဲနဲလွန်သွားတယ် ။
၃ ။ Moderator –7ကြီးကျပြန်တော့လဲ စတစ်ကီ အထိပါလုပ်ပစ်လိုက်တော့ ၊
သနား ညှာတာမှု အပိုင်းမှာ အားနည်းသွားတယ် ထင်မိတယ် ။
ဒါပေမယ့် ၊ လိုရင်းက ၊ အားလုံးက စေတနာ နှင့် လုပ်ကြတာပါ ။
ဒီပိုစ့် ကို member only လုပ်ပေးပါ လို့ တောင်းဆိုပါရစေဗျာ..။
account register မလုပ်ဘဲ ဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူသက်သက် (non member)
တွေ အတွက် သူတို့နဲ့ မဆိုင်တဲ့ post ဖြစ်နေတာ တကြောင်း ရယ်..။
နောက်တခု သူတို့ အနေနဲ့ ပြသနာ ရွာကြီးပါလားကွာ
မ၀င်တာအေးပါတယ် ထင်သွား မြင်သွားရင် မကောင်းဘူး မှတ်လို့ပါဗျ။
ဒီပိုစ့် မြင်လို့လည်းး ဘာမှ မထူးတော့ဘူးလေ
ဒီတော့ ဒီပိုစ့်ထဲမှာ အကျေအလည် ရှင်းကြ
အော် ဆက်ဆက်ရဲ့ .. .ကျနော့် ဆိုလိုရင်း နားမလည်ဘူး ထင်တယ်
တခြားပိုစ့်တွေနဲ့ မတူဘူး ခည
တခြားပိုစ့်တွေက ရွာထဲပဲ ပြောနေကြတာတွေ ရွာနာမည်တွေနဲ့ချည်း..
(ဖဘ ကြီးနဲ့ မဆက်သွယ်ထားဘူး)
ဒီပိုစ့်မှာက ဖဘ ပေါ် က (close group က)ကွန်မန့်တွေပါ ထည့်ထားတယ်…
အဲ့သည့်မှာ ဖဘ ပေါ်မန့်ထားသူတွေ ရဲ့privacy ကို အကာအကွယ် ပေးသင့်တယ်ထင်တယ်
နိသာ ရွာထဲလည်း ဒီနာမည် ဖဘ ပေါ်လည်း ဒီနာမယ်လေ…
တချို့ လူတွေကျ ရွာထဲ က ရွာသူား နာမည် ဖဘ ပေါ်ကျတော့
ကိုယ့်နာမယ်ရင်း…. ဆိုတော့ .. သူတို့ကို (ရွာသူား ချင်းချင်းက)
ဖဘအမည် မာဂရက် ရွာအမည် ဂွက်ထော် သိနေ ခင်နေတာ တော့ ပြသနာမဟုတ်ပေမယ့်
ရီဂျစ်စရီ မလုပ်ဘဲ ရိုးရိုးဖတ်သူတွေ ကို (ဘယ်ကမှန်းမသိ ဘယ်သူမှန်း မသိသူတွေကို)
ရွာထဲက ဘယ်သူဟာ ဖဘပေါ်မှာ ဘယ်ဝါ ပါဆိုတာ
သိလည်း ပြသနာ မရှိသူ ရှိမှာ အမှန်ပေမယ့် မသိစေချင်သူ ရှိမယ် သည်တော့ ဒါကို ကာကွယ်ပေးသင့်တယ် မြင်တယ်
အထဲက ကိစ္စ အပြင်မထုတ်တာ ကောင်းပါတယ်။ member only ဆိုတာကလည်း
လိုအပ်လို့ ထည့်သွင်းထားတဲ့ feature ပဲမို့ ပြောပြတာပါ..
လုပ် မလုပ်ကတော့ ပိုစ့်ပိုင်ရှင်သဘောပါ
ကွင်းပိတ် ပီးပီမို့ ပြောလို့ရပြီ လေ..
ပိုစ့်ပါ အကြောင်းအရာတော့ နောက်တခေါက် ပြန်လာပီး မှ ဆွေးနွေးပါမယ်ဗျာ
ခုတော့ ထမင်း ကိုက်လိုက်အူးမယ်…
” စကားမစပ် မော့ဆဲဗင်းက
သားလည်း မှုတ်ဖူးနော်… ”
ဟီ ဟိ ။
စကားမစပ် မော့ဆဲဗင်းက ၊
အဘ လည်း မှုတ်ဖူးနော် ။ တိယား ။
အ ဟိ ဟိ ဟိ ။
member only လုပ်ပြီးသွားပါပြီ
ကိုရာမည ပြောထားတဲ့ထဲက နံပါတ်တစ်အချက်မှာ
အားမနာတမ်း ကွန်ကောင်းလို့ဆိုပြီး ထင်ရာစိုင်း တင်နေတဲ့ပိုစ့်တွေကို
စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းဖို့တာဝန်ရှိမောဒ့်တွေ ဝင်ရောက်လမ်းညွှန်ခြင်းမရှိ လို့ ဆိုထားတာလေး ကျနော် သိပ်သဘောမတွေ့ ဘူးဗျ။
အဲဒီအချိန်မှာ ရွာထဲ မော့နှစ်ယောက် သုံးယောက်လောက်တော့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် အက်ဒစ်လုပ်နေသူလည်း ရှိပါတယ်။
မော့ဒ်တွေ လုပ်နေသမျှ အပြင်လူတွေ တခြားမန်ဘာတွေ မြင်နေရတာမှ မဟုတ်တာပဲဗျာ။
အဲဒီအချိန်မှာ ဂဇက်အတွက် အချိန်မပေးနိုင်သေးတဲ့ တခြားမော့ဒ်များကို အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး။
စောင့်ကြည့်ပြီး ထိန်းသင့်တာ ဝင်ထိန်းဖို့ အဆင်သင့်ရှိနေတဲ့မော့ဒ်များကိုလည်း အပြစ်မတင်သင့်ပါဘူး။
မော့ဒ်မဟုတ်ပဲ မန်ဘာဝင်အချင်းချင်း ဝင်ထောက်ပြ လမ်းညွှန်တဲ့ ရွာသူားတချို့လည်း ရွာ့စည်းကမ်းချက်တွေကို ဝင် ထောက်ပြပေးနေကြတာ တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
သူတို့လည်း တာဝန်ကျေပါတယ်။ အမုန်းခံပြီး ဝင်ပြောရတာလေ။
နာမည်ရင်းနဲ့ အမုန်းမခံနိုင်လို့ ဝင်ပြောတဲ့ မန်ဘာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
သူတို့ကတော့ နာမည်ရင်းနဲ့ဆို မျက်နှာပူနေရမှာစိုးလို့ ထင်တယ်
မဆိုင်တာတွေ ပတ်ရမ်းတာဆိုရင်တော့ အဲဒီ နာမည်ဝှက်တွေကို အပြစ်တင်ရပါမယ်။
ရည်ရွယ်ချက်က ရွာ့ ကောင်းကျိုးအတွက် စည်းထဲဘောင်ထဲက ဝင်ထိန်းပြောတာကိုတော့ အသိအမှတ်ပြုရပါမယ်။
ကျနော့်သဘောကတော့ စောဖောရှော ဝင်ထိန်းပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သူ့ကိုအသိအမှတ်ပြုပါတယ်။
သူ ဘယ်သူလဲ ကျနော်မသိပါဘူး။
လေသံမာမာနဲ့ ဝင်ပြောတာတစ်ခုပဲ သူ့ဘက်က ချွတ်ချော်ပါတယ်။
မဆိုင်တဲ့လူကို ပတ်ရမ်းတာမျိုး သူမလုပ်ပါဘူး
မိုက်ကြေးခွဲသလို အာဏာသိမ်းမလိုလိုတွေ မလုပ်ပါဘူး။
ဒါက နံပါတ်တစ်အပေါ် ကျနော့်အမြင်ပါ
ဖုန်းနဲ့ စာရိုက်ရတာမို့ ကျကျနန မပြောနိုင်သေးပါဘူး။
မော့ဆဲဗင်း လို့လည်း မထင်ပါဘူးခင်ဗျာ
ကျနော် မော့7လုံးဝ မဟုတ်ပါကြောင်းးး
ဘာဖစ်နေကြတာလဲ ဟမ် @_@
ဦး ဂျစ် says:
ဘာတို့ ညာတို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး
တချို့သော သစ်သစ်လေးတွေ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
အခြားမီဒီယာ၊ Websiteများ၏ သတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ၊ forwarded email မှစာများ (မူရင်းအစစ်အမှန်ကို ညွန်းဆိုခြင်းမရှိပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်မထည့်ပဲ)တိုက်ရိုက်ကူးတင်ခွင့်မရှိပါ –
ပြောချင်တာတွေ များနေလို့ ….
စည်းကမ်းချက် တချို့တ၀က် ကို ဖေါ်ပြပေးခြင်း သာလျှင်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဒီပိုစ့်က တွေ့ မရှောင် အဖွဲ့ ကိုယ်စား ပြောပေးနေတဲ့ ပိုစ့်လားဟင်
အစွန်းနှစ်ဖက်ကြားမှာ မဟုတ်ပဲ တစ်ဖက်ကို ကပ်နေသလားလို့
ဒီအရှုပ်ထုပ်ကြီးကို အင်မတန် စိတ်ပျက်သွားပြီမို့
စောင့်ကို မကြည့်တော့ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါကြောင်းးး
ဖတ်ခြင်းမဖတ်ခြင်းက ကိုအလင်းဆက်သဘောပါ ။
ဒီပို့စ်ဟာ ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေဖြစ်ရပါတယ်ဆိုတာ ဖြစ်စဉ်ကိုအကျဉ်ဖေါ်ပြတာပါခင်ဗျာ
ကိုအလင်းဆက်က တရားဝင်ကြေငြာထားတဲ့ မော်ဒရိတ်တာ တစ်ဦးဖြစ်လို့
ဖြစ်ရပ်ကိုလည်း မြင်တွေ့သူတစ်ဦးအဖြစ် သိနေမယ်ထင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ရေးတာ အစွန်းရောက်တယ်လို့ယူဆမယ်ဆိုရင်
အခြားသောသူများ အခြေနေမှန်မသိပဲ ဝင်ပြောတာဟာ
ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုကိုအလင်းဆက် သိနေပါလိမ့်မယ် ။
မော့အဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ မည်ကဲ့သီု့သုံးသပ်ပါသလဲ ခင်ဗျာ ။
မဖြေမနေရမဟုတ်ပါဘူး ဖြေချင်မှဖြေပါခင်ဗျာ ။
တွေ့မရှောင် လို့ထင်လျှင်လည်း မဟုတ်ကြောင်း
ကျွန်တော် ရာမညဟာ တွေ့မရှောင် အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါဘူး ။
တွေ့ဖို့ လိုအပ်သူကိုလည်း ဘယ်တော့မှမရှောင်ဘူးဆိုတာ
(ဂေဇက်ရေစီး လှိုင်းကြီးလေထန် ဖြစ်ရပ်မှန်) လို့ ဆိုထားတော့ ပိုမှန်သွားအောင် နဲနဲ တည့်ပေးဦးမယ်ဗျ….
((သို့သော် ဦးဦးပါလေယာနှင့် အော့ကျောလန်မှာ ရင်းနှီးဟန်မရှီပါချေ ။))
အော့ကြောလန်က သူဘယ်သူမှန်း ကျုပ်မသိလောက်ဘူးလို့ အခုထိထင်နေတုန်းရှိပါသေးကြောင်း….
((စောဖောရှောနှင့် ဦးဦးပါလေယာမှာ ရင်းနှီးသူများ ဖြစ်နိုင်သည် ။ ဇတ်တိုက်၍ကွန်မန့်ပေးခြင်းဟု ယူဆရပါသည် ။))
စောဖောရှောဘယ်သူဆိုတာ အစကတည်းက ကျုပ်သိပါတယ်။
ဒါကြောင့် သူ့ပိုစ့်မှာ tone နဲနဲလျော့သွားအောင် အပြောင်အပျက်ဝင်ပြောရင်း ဖြည်ပေးတာ။
သူကတော့ သူဘယ်သူမှန်းကျုပ်သိကြောင်း ကျုပ်ရဲ့ ဒုတိယကွန်မင့်အထိ မသိသေးပါ။
အဲသည်မှာ လေသံခြားနားသွားတာ မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဇတ်တိုက်ပြီးကွန်မင့်ပေးတာ မဟုတ်ပါဘူး…။ ဒါပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲနဲနဲလှမ်းကြည့်လို့မြင်မိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ လိုအပ်မယ်ထင်သလို အနားသတ်ပေး၊ ဖြည့်ပေးတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်အနေနဲ့ ရွာကိုဝင်ဖို့ အင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ အခွင့်အရေး နည်းပါတယ်။ ဒီကြားကပဲ ရွာအပြင်ကနေပြီး
ခရီးသွားဟန်လွှဲဆိုသလို ကိုယ့်ရှေ့ရောက်လာတာလေးတွေကို လုပ်စရာရှိတာ လုပ်လိုက်လေ့ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ စောဖေါရှောနဲ့ အော့ကြောလန် တို့ဟာ သိပ်ပြီး လှို့ဝှက်လှတဲ့ စီးကရက်ဆေးပြင်းလိပ် အကောင့်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။
(ဘယ်သူမှ လျောက်မပြောနဲ့ ငါပြောပြီးပြီ …) ဆိုသလို
သူတို့ ဘယ်သူမှန်းသိပြီးသူ အစကတည်းက တော်တော်များပါတယ်
သူတို့ကလဲ သူတို့ဘယ်သူမှန်းသိမှာ ကြောက်တဲ့ သူတွေမဟုတ်ပါဘူး..။
သူတို့ လုပ်စရာရှိတာကို လိပ်ပြာလုံလုံ နဲ့ လုပ်ကြတာပါ…။
မျက်နှာမနာချင်လို့ နာမည်လေး စတိပြောင်းထားကြတာပါ….။
တွေ့မရှောင် ဆိုတာကတော့ တကယ့် စီးကရက် အကောင့်ပါ…။
ဒါပေမယ့် ကံဆိုးတာက သူတို့ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ သတိချွတ်ချော်မှု့ကြောင့် …..
သူတို့ထဲမှာ ဘယ်သူပါမှန်း တစ်စ လောက် ထွက်သွားတယ်လို့ ကျုပ်ထင်တယ် …..
အဲဒါကို သူတို့ပြန်သတိပြုမိပုံရလို့ အခုအသံမထွက်တော့တာ
မော်ဒရေတာတွေအပါအ၀င် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်လို့ ရပ်သွားတာမဟုတ်ပါဘူး …။
(အခုကျုပ်ရေးတဲ့ ကွန်မင့်ထဲက စာလုံးတစ်လုံးစီတိုင်းဟာ အဓိပ္ပါယ် ရှိပါတယ်နော….)
ကိုပေါက်ရဲ့ FB ကကွန်မင့်အပေါ် ကျုပ်သဘောထားလဲ ပူးတွဲ ပြောချင်ပါသေးတယ်။
(ကျုပ်နဲ့ ကိုပေါက်နဲ့ လုံးဝ မတိုင်ပင်ထားပါ )
(ကျနော့် အမြင်ပြောရရင် (၁) တွေ့မရှောင် သည် ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ ရည်ရွယ်လာသော် လည်း စကားေ ပြာ သည် မှာ မာကျောရင့် သီးတယ်လို ခံစားရပါ တယ်။)
ကျုပ်ကတော့ ရင့်သီးတယ်လို့ မခံစားရပါဘူး။ လေသံနဲ့ တင်ပြပုံ ခပ်တင်းတင်းရှိတာပါပဲ။ ဒီအပေါ်မှာ မကြိုက်ပေမယ့် အပြစ်မတင်ပါ။
(Ko Pauk Mandalay
(၂) အားမနာ တမ်းပြောရလျင် ဂေဇက်မှ မော့ဒ်များ သည် ရွာ ကို ပစ် ထား တယ် လို့ ခံစား ရ ပါတယ်။……………………………………….့ အကြံ ပေးချင် တာ တစ် ခု က ရွာထဲမှ အကူ အညီ တောင်း လို သူ များအ တွက် မောဒ်များနဲ့ ဆက်သွယ် စ ရာ နေ ရာ လေး တစ် ခု ဖန် တီးေ ပး သင့် ပါတယ်။)
သဘောတူပါတယ်။ ထပ်ဖြည့်ချင်တာက မောဒ့်များနဲ့ တရားဝင် (တရားဝင်) ဆက်သွယ်စရာ နေရာတစ်ခု -လွယ်လွယ်ဝင်လို့ရတဲ့နေရာ(ဥပမာFB) မှာ ရှိသင့်ပါတယ်။ congress မှာလာပြောလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် အဲသည် congress ရှိကြောင်း မသိသူတွေတောင် အများကြီး။ အဲသည်မှာပြောလဲ ဘယ်သူမှ အရေးမလုပ်တာ အများကြီးဖြစ်တယ်။
((Ko Pauk Mandalay
(၃) တွေ့ မရှောင် ကိစ္စ မှာ မော့ (၇) လုပ်ရပ်သည် တရား နည်းလမ်း မကျ လို့ ခံ စား ရ ပါသည်။))
တရားနည်းလမ်းအကြောင်းပြောရရင် မောဒ့်ရွေးချယ်ထားပုံကတောင် စရမလားမသိ။ ဒီနေရာမှာ ဒီအားနည်းချက်ကို သူကြီးမြင်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။
((((Ko Pauk Mandalay
(၄) သူကြီး ကိုခိုင် ကလဲ အလုပ်များ တာ မှန် ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် ကိုယ် ရွေးချယ် ခန့် ထား တဲ့ မောဒ် များ နဲ့ အဆက် အသွယ် ရှိ နေ သင့် တယ် လို့ ယူ ဆ ပါတယ်။တကယ် တော့ အဆက် အသွယ် မရှိ လို့ သာ ရွာ ထဲမှာဘာဖြစ်နေ တယ် ဆို တာ ကို မသိ လိုက် တာ ဖြစ် ပါ တယ်။ မောဒ်တွေ ဘက် က ပြော စရာ ရှိ ပါတယ် သူ ကြိး ခန့် လို့ ကျုပ် တို့  မအားဘဲ လုပ်နေ ရ တာဆို တာ ကို ပါ ဘဲ။ အဲ တော့ အကြံ ပေး ချင် တာ တစ်ခု က ကိုယ် မ လုပ် အား ရင် မ လုပ် နိုင် ရင် သူ ကြီး က မောဒ်လုပ် ပါ လို့ အကူ အညီ တောင်းလာ ခဲ့ ရင် ယဉ်ကျေးစွာ ငြင်း ပယ် ခဲ့ ရင် တာ ၀န် ထမ်းဆောင် နိုင် သူ တစ် ယောက် ကို ထပ်ပြီး ရွေး ချယ် လို့ ရသွားမယ် လို့ ယူ ဆ ပါ တယ်( မောဒ်ဖြစ် တဲ့ အတွက် ဘာ ခံ စား ခွင့် မှ ထူး မရ ဆို တာ သိ တဲ့ အတွက် မောဒ် အဖြစ် လက်ခံ ခဲ့ သူ များ ကို လဲ ကျေး ဇူးတ င် လေး စား ပါ တယ်) ))))
ခက်တာက တရုတ်သိုင်းကားထဲကလို လုပ်ပိုင်ခွင့်တံဆိပ် ပေးထားလိုက်တော့ တိုင်တိုင်ပင်ပင်လုပ်ကြတာမျိုးထက် ကြုံတဲ့သူ ကြုံသလိုလုပ်ကြတာမျိုးနဲ့သာ စခန်းသွားနေပုံရတယ်။
(((( Ko Pauk Mandalay
(၅) ဒီရွာ က ဒီ မို ရွာ လို့ အများ က လက် ခံ ပါတယ်. မိမိပြောတာ ကို တာ ၀န် ယူရဲ ရင် ကြိုက်တာ ပြော လို့ ရ ပါတယ်။ သူ ကြီး ကို ခိုင် ကိုယ် တိုင် က လွတ်လပ်စေ ချင် တယ် မချုပ် ချယ် ဘူး ဆို တာ လဲ သိ ရ ပါတယ်။ ဒါ ပေမယ့် ရွာ နံ ဘေး မှာ ရွာသား တွေ လိုက် နာ သင့် တဲ့ စည်းကမ်းတွေ ကို အများမြင်အောင် ရေး ထား ပါတယ်။ ……………………………………. ))))
သင့်လျှော်တဲ့ အရေးယူမှု့မရှိလို့ အခုအခြေအနေအထိဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။
အပြင်မှာလဲ (လူခင်ရင် မူပြင်တယ်… စသည်ဖြင့်) ဗြောင် ပြောနေကြတာကြာပြီဖြစ်တယ်။
(၆) ရွာ ချစ် သူ များ ကို ပြော ချင်တာ တစ်ခု ကတော့ ရွာ နဲ့ ပါတ်သက် တဲ့ အကြောင်း ကိစ္စ ပေါ် လာ ရင် ကိုယ် တိုင် သေ ချာမ သိ ဘဲ (ကိုချော စကား ငှားသုံးပါမယ်) နားစွန် နား ဖျား ကြားတာနဲ့ ထ မအော် ကြ ဘို့  ပါဘဲ။ ဒါမျုိး က မိတ် ပျက် တတ် လို့ ပါ။ နောက် ရွာသူရွာသား အား လုံး က မိတ်ဆွေ တွေ ဖြစ် နေ လို့ ပါ။ )))))
(ရ) အလကား နေ ၇င်း ၀င် ၀င် ငန် ထတ် တဲ့  ကျနော် ကိုေ ပါက် ကို ၀ိုင်း ဆဲ ပေး ကြ ပါ။ နောင် ၀င် ပြီး လျှာ မရှည် ရဲအောင် လို့ ။ ))))
Mpt connection မကောင်းတဲ့ကြားကဒီလောက်ဆူနေရင်?
ရွာရိုးကိုးပေါက် အချိန်တိုင်း လျှောက်နေသူရှိသလို
တစ်ချို့ကြတော့ ခရီးသွားဟန်လွဲ ကသုတ်ကယက် ဝင်ကြပါတယ်
အချိန်မရသူတွေကျတော့ ရွာထိပ်ကမျှော်ကြည့် လှည့်ပြန်၏ လုပ်ကြပြန်ရော
အဲဒီတော့ အမြဲအမြင် တစခဏအမြင် ဖြတ်ခနဲအကြည့် တွေအရ ဖြစ်တည်ကြတဲ့ ရေးးဖွဲ့ပုံအယူအဆကလည်း ဘယ်တူနိုင်မလဲဗျာ အဲဒီလို မတူကွဲပြားတာကလည်း ဒီရွာရဲ့ အနှစ်ပါဘဲလို့( ကျုပ်အယူအဆ သီးသန်သာဖြစ်ပါသည် )
Post လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ရာမည။
ပြသနာ မဟုတ်ခဲ့တဲ့ ပြသနာပြီးသွားပြီလို့ မှတ်လိုက်ကြရအောင်လား။
ကော်ပီပွါးခဲ့တဲ့ ရေမြေသနင်း ကလဲ သူ ကော်ပီ မလုပ်တော့ပါဘူး ပြောပြီးပြီ။
ဒါဟာ ကောင်းတဲ့ အဆုံးသတ်ခြင်းပါ။
သူလဲ သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားလေးတွေ နဲ့ ဆက်တင်မယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာကတော့ နောင်အတွက် ဒါမျိုး ဖြစ်ခဲ့ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ အကျိုးအကြောင်းပြ တိုက်ရိုက် ပြောပြီးဖြေရှင်း ကြဖို့ပါ။
အင်မတန်ရှင်းတဲ့အဖြေရပြီးပြီးသွားတာ ကို ဆက်ပြီး အဖြေရှာနေဦးမယ် ဆို နေရင် တစ်ခြား ပိုပြီး ကောင်းတဲ့ စကား တွေ ပြောဖို့ အခွင့်အလမ်း လွတ်သွားပါမယ်။
ရွာကို ဂရုစိုက်တဲ့ ချစ်တဲ့ သူတွေ အများကြီးပေါ်လာတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
“မျိုးချစ်စိတ် တစ်ခုထဲ ရှိနေ ပြနေ အော်နေရုံ နဲ့ မလုံလောက်ဘူး” ဆိုတာပါဘဲ။
တော်ကြာ အဲဒီ အလောင်း ကို ထပ်ပြီး ပုံသွင်းမိကြ မစိုးလို့ပါ။
ဆရာကြီးဝင်လုပ်တယ် လို့ တလွဲတော့ မထင်ကြစေချင်ပါ။
နားလည်ကြမယ် လို့ တော့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကိုလတ် ကြီး ရေ
ဒီ အလောင်း ကြီး ကို ဆေး စိမ် ပြီး ပြ တိုက် ပို့ လိုက် ကြ စို့
အခု လို ဆို တော့ လဲ သာ သာ ယာ ယာ ပါလား
ပျော်စရာလို့ မြင်လိုက်ရင်လဲ ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သမို့
ပါဝင်ခဲ့သူ အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါ။
နောက်တစ်ခါ ထပ် က ရင်တော့ ဇာတ်လမ်း မထပ်စေနဲ့ပေါ့။
နောက်တစ်ခါ ဆို ရင် ဇာတ်ညွန်းကို မောင်ငြိမ်း မင်း ကို ရေး ခိုင်း လိုက် မယ်
ဆရာမင်းလူ စကား ငှားသုံးလိုက်မယ်
စိတ်ကုန်လို့ အိပ်နေတာ ခုမှ တစ်ရေးနိ်ုးလာတာမို့ ခွှေးလွတ်ကြပါကုန်
ဟို ဒင်း says:
ဟိုဒင်း တွေ ဖြစ် နေကြ တယ်
တကတည်းမှပဲ ကြားကြားလို့ မှ ကောင်းကြသေးရဲ့လား
ခေါင်းတွေဖြတ် လူတွေသတ်ကုန်ပြီ အောက်မေ့ပြီး
ဒါ…န၀တက ရုပ်မြင်သံကြားမှာ တိုင်းပြည်လူထုကို
ထုတ်လွှင့်ပေးသွားတဲ့ ခေါင်းဖြတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးတော့
ဆူပူစေရန် ရည်ရွယ်ရင်းမဟုတ်ပါ ဘူးခင်ဗျ
ကျွန်တော် ရွာသားများဂရုမှာ ပြောခဲ့ပြီးလို့ ထပ်မပြောလိုတော့ပါဘူးခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ပြောတာ အဲဒီလို မဟုတ်ပါဘူးဗျ…။
သမိုင်းရေစီး လှိုင်းကြီးလေထန် ဖြစ်ရပ်မှန်…ဆိုတဲ့
ငါတို့ မရှိရင် မင်းတို့ ဒီလိုဟာတွေ ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီး
မော့ ဆဲဗင်း အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ပါတယ်။
ကျနော့်ရဲ့ လုပ်ရပ်အမှားကြောင့် အားလုံးကို တောင်းပန်ပါတယ်ဗျို့
ဘာလို့များ မော့ဒ် ဆဲဗင်းကို ကြားကနေ ခေါင်းဝင်ခံပေးနေကြပါလိမ့်
ဆေးထိုးတာလည်း ကြည့်ထိုးကြ ဗျာ
ဒီလိုပဲ စ ကြတာ ပါ။ စိတ်မဆိုး ပါနဲ့ ကိုရင် တွေ့မရှောင် ရယ် . . . .
Shwe Poe says:
နောက်နေ့ ကစ ပြီး ရွာထဲမှာပျော်စရာတွေနဲ့ သာယာ
ချမ်းမြေ့ တော့မယ်ထင် တယ်နော်